TOKYO — The United Nations refugee agency will provide technical assistance to the Myanmar government if it begins to process and verify citizenship for Rohingya to resolve the humanitarain crisis, the body’s top official said on Monday. U.N. High Commissioner for Refugees Filippo Grandi described the Rohingya refugee crisis as the worst since the end of the Cold War and compared it to the ethnic cleansing during the Balkan War and the genocide in Rwanda in the 1990s. “Violence has to be completely stopped and the problem of their citizenship has to be resolved,” Grandi toldapress conference at the Japan...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scot Marciel နဲ့ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ မောင်တောဒေသအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP နဲ့ စစ်တွေမြို့က ပါတီဌာနချုပ်မှာ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွေက မွတ်စလင်တွေဘက်က ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာတွေဟာ ပဋိပက္ခကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေတာကြောင့် မျှမျှတတပြောဆိုဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းအောင်ကျော် ကပြောပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်မခံဘူး၊ အဲဒီလို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က မကြိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောဆိုဖိအားပေးခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးတော့ ပဋိပက္ခတွေကို ကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင် တယ်၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်း တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က စာနာထောက်ထားစွာနဲ့ မျှတစွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ ပြန်ပြီးတင်ပြတဲ့အခါ သူတို့က အဲဒါကိုလက်မခံဘူး” ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့ သီးခြားနယ်မြေထူထောင်လိုတဲ့ အကြံအစည်နဲ့ ထွက်ပြေးကြတာဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ပြောဆိုရာမှာ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့က ဒီအချက်ကို သူတို့အနေနဲ့ လက်မခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ရာမှာ လူမျိုးတုံးသန့်စင်ရေး Ethnic Cleaning အထောက်အထားတွေကို တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရကို တင်ပြသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scot Marciel နဲ့ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ မနေ့ညက စစ်တွေမြို့ကို ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစ်တွေမြို့အခြေစိုက် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အချို့နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံ ခဲ့သလို အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်က မွတ်စလင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။...
(NAYPYITAW, Myanmar) — Myanmar leader Aung San Suu Kyi said the world is facing instability and conflict in part because illegal immigration spreads terrorism inaspeech Monday that comes as her country is accused of violently pushing out hundreds of thousands of unwanted Rohingya Muslims. Suu Kyi did not directly mention the refugee exodus as she welcomed European and Asian foreign ministers to Naypyitaw, the capital of Myanmar. But her speech highlighted the views of many in Myanmar who see the Rohingya as illegal immigrants and blame the population for terrorist acts. The ongoing Rohingya exodus is sure...
မြန်မာပြည်ကို ၂ရက်ကြာရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jeffrey Alan Merkley ဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့က အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိ ကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့အနေနဲ့ ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လွှို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ မီဒီယာတွေကရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ဆွေးနွေးသွားတာ ဖြစ် ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အခြေအနေမှန်ကို လေ့လာသွားတာမရှိဘူးလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြော ခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မမြင့်မြင့် ခိုင်က ပြောပြပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရမှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့အပါ အ ဝင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းကို စုံစမ်းလေ့လာဖို့အတွက် အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော်အမတ် Jeffrey Alan Merkley ဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များအဖွဲ့ဟာ မြန်မာပြည်ကို ၂ရက်ကြာ ရောက်ရှိနေတာပါ။ အမေရိကန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် အ ရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့က မွတ်ဆလင်တွေ နေထိုင်တဲ့ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အခြေအနေမှန်ကို လေ့ လာဖို့ သေချာအချိန်ယူသင့်ပြီး အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တခုတည်း လေ့လာသွားတာမျိုး...
Gregory Stanton The UN calls the Myanmar army’s aggression against the Rohingya “ethnic cleansing”. “Ethnic cleansing” isaterm invented by Slobodan Milosevic. It’saeuphemism for forced displacement and genocide. It’s an insidious term because there is no international treaty law against it, whereas there are international laws against forced displacement and genocide. “Ethnic cleansing” is notacrime under the Rome Statute of the International Criminal Court. It has no legal meaning in international law. Another term without legal meaning is “atrocities”. Genocidal massacres are acts of genocide. Genocide is defined as acts intended to destroy, in...